समाचार Archives - Page 1589 of 1682 - Dainik Online Dainik Online
जनआन्दोलनताकाको सम्झना गराउँदै सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध ३ महासंघ एउटै मञ्चमा
रुपन्देही । करीब एक महिना अघि खोकीको औषधि किन्ने बहाना बनाउँदै एक महिला नेपाल– भारत सीमानाका बेलहिया आइपुगिन् । शङ्का लागेर माइती नेपालका कर्मचारीले उनलाई रोके । सोधपूछ गर्दै जाँदा
काठमाडाैं । तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नुभएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको विषयमा ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुले गरेका गतिविधिबारे गहिरिएर सोच्नुभएको छ ? यदि छैन भने उनीहरुका क्रियाकलापबारे
शौचसँगै सङ्गीतको आनन्द लिन नेपालगञ्ज जानुहाेस
काठमाडाैं । तपाईँ नेपालगञ्जवासी हुनुहुन्छ या यहाँको पाहुना । यदि तपाईँ नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ भने अब शौचसँगै सङ्गीतको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । यसका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक डिजिटल शौचालय
घर पुनर्निमाण नभएको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको आग्रह
राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कुनैपनि नागरिकको घर पुनर्निमाण हुन नसकेको भए प्राधिकरणमा जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सोमबार काठमाडौंमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाले पूर्वमेयर ध्यानबहादुर राईको निधनको शोकमा मंगलबार बिदा घोषणा गरेको छ । नगर कार्यपालिका मातहतका कार्यालय, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा बिदा दिइएको उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद
हिमपहिरोमा पुरिएका सुर्खेतका गोर्खा सैनिकको वनारसमा अन्त्यष्टि
काठमाडौं । भारतको जम्मु–कस्मिरस्थित एउटा हिमपहिरोमा परी निधन भएका सुर्खेतका गोर्खा सैनिक लक्ष्मण बिसीको अन्त्येष्टि गरिएको छ। बिसीसहित पाँच भारतीय सैनिकको गत पुस २९ गते जम्मु–कस्मिरको तंगधार सेक्टरमा हिम पहिरोमा
लाङटाङ निकुञ्जमा २ विद्यार्थी हराए, खोजीमा हेलिकोप्टर परिचालन
मेलम्ची । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार दिनदेखि बेपत्ता दुई विद्यार्थीको खोजीका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धारकर्ता पु¥याइएको छ। विद्यार्थी बेपत्ता भएका भनिएको निकुञ्जमापर्ने नुवाकोटको घोप्टेफेदीमा हेलिकप्टरबाट उद्धारकर्ता पु¥याइएको हो । हेली एभरेष्टको
चोरिएको मूर्ति भेटिएपछि बाजागाजासहित अबिरजात्रा
काठमाडाैं । पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा रहेका बहुमूल्य धातुका मूर्तिमध्ये सबैभन्दा ठूलो भगवान्‌ दत्तात्रयको मूर्ति भेटिएको छ। चन्दननाथ नगरपालिका-१ मा पर्ने दानज्युलोमा सोमवार बिहान मूर्ति भेटिएपछि मानिसहरूले
बगैचामा खेल्न जाँदा पोखरीमा डुबेर २ बालिकाको ज्यानै गयो
काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका– १ स्थित शान्ति बगैंचा पार्कभित्र रहेको महादेव पोखरीमा डुबेर दुई बालिकाको मृत्यु भएको छ । आफ्नी हजुरआमासँग सोमवार पार्कमा खेल्न गएको समयमा मालारानी गाउँपालिका–